အတွေးအမြင် | Page6| Published | ShweHub brought to you by ShweRoom
ဘလော့သုံးနှစ်ပြည့်မှာ ပြန်လည်သုံးသပ်မိသော ၂၀၁၂
By suwatisoe 3222 days ago on အတွေးအမြင် from madankoo.blogspot.sg
ပစ်ပစ် ကလေးက ကိုယ့်ကိုတဂ်ပိုစ့်လုပ်ထားတယ်။ မားမား သူတဂ်လုပ်ထားတဲ့ပိုစ့်ကို မရေးဘူးလားတဲ့ ။ .. အင်း ရေးမယ်ရေးမယ်ပေါ့ .ထုံးစံအတိုင်း အရှုပ်တွေလုပ်နေတာလား အလုပ်တွေရှုပ်နေတာလား . ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တောင်မသေချာမရေရာလို့ ဟိုသီချင်းလို မသေချာဘူး မရေရာဘူး ဘာမှမသိဘူး သီချင်းတောင်ဆိုရမလိုဘဲ .
ပြန်ကြည့်လိုက်တော့လဲ ဘာတွေမှန်းမသိခဲ့ဘူး ၀မ်းနည်းခြင်းဝမ်းသာခြင်းတွေလဲပြည့်နှက်လို့ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနဲ့ သောကတွေလဲ အပြည့်ဘဲ . ဒေါသ မောဟတွေ တောင်အဆစ်ပါလိုက်သေးတယ် ဘာလဲလို့မမေးနဲ့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြန်ကြည့်တောင် ဘာဆိုဘာမှမသိဘူးဖြစ်နေခဲ့တာ . ။
အချစ် လက်ထပ်ခြင်း နှင့် အိမ်ထောင်
By suwatisoe 3222 days ago on အတွေးအမြင် from www.myworld-phyophyo.com
ဧဗာ သိပ်ပျော်နေသည်။ အိပ်မက်ထဲက သူရဲကောင်း ချာလီနှင့် လက်ထပ်ရလို့ပဲပေါ့။ ဧဗာ ဘာကလေမှာ စိတ်ပညာ ဒေါက်တာသင်တန်းတက်နေချိန်နာပါ စဗျစ်ခြံမှာ အလုပ်လုပ်နေသည့် ချာလီနှင့် တွေ့သည်။
By maungmaung 3223 days ago on အတွေးအမြင် from www.maukkha.org
ကိုယ့်ကိုယ်ကို အပျိုဖော်ဝင်ပြီလို့ ထင်လိုက်ပြီလား။ ပျိုမေတို့ဟာ မိုးလင်းလို့ အိပ်ရာကထလိုက်တာနဲ့ အိပ်ရာခင်းပေါ်မှာ ဘာတွေ့မလဲ၊ လုံချည်မှာ ဘာတွေ့မလဲလို့ စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ ရင်တွေဖိုရတာရယ်၊ မှန်ထဲ ကြည့်လိုက်ချိန်မှာ ငါ့ကိုယ်ခန္ဓာ ဘယ်လောက်များဖွံ့ထွားပြီး စွင့်ကားလာပြီလဲလို့ သုံးသပ်ရတာရယ် ဖြစ်လာပြီဆိုရင် ထင်တဲ့အတိုင်း အပျိုရိုင်းစိတ်တွေ ဝင်လာပြီလို့သာ မှတ်လိုက်တော့။
ငြင်းခုံခြင်း ယဉ်ကျေးမှု ထွန်းကားစေချင်
"ဟိုဂျာနယ်ထဲက ဆရာ့ကို တိုက်ခိုက်ထားတဲ့ ဆောင်းပါးဖတ်မိသလား၊ အဲဒါဘယ်လိုယူဆသလဲ"
လူငယ်ဂျာနယ်လစ်တစ်ယောက် ရောက်လာပြီး မေးလိုက်တဲ့ မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါကရေးခဲ့တဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်အပေါ်မှာ သဘောမတူနိုင်တဲ့ စာရေးဆရာတစ်ဦးက ပြန်ပြီးချေပရေးသားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
By YaminThu 3258 days ago on အတွေးအမြင် from mompoem.blogspot.sg
ကျောင်းပေါက်ဝမှာ မေမေကိုတွေ့တာနဲ့ သူပြေးဖက်တယ်။ မေမေ
By YaminThu 3258 days ago on အတွေးအမြင် from 8yar.blogspot.sg
ကမ္ဘာ့တစ်ခွင်မှာ ဂုဏ်ယူစရာ ပါဝင် ယှဉ်လာနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့ တို.မြန်မာများ
By eieilwin98 3302 days ago on အတွေးအမြင် from myanmarinsingapore.com
စင်္ကပူရောက် မြန်မာများ ဝဂ်ဘ်ဆိုက်မှာ မေစိုး ( ရွှေမန္တလေး ) ရဲ့ ဆောင်းပါးလေးကိုဘတ်လိုက်မိရာက အခု ဒီ ပို.စ် ကိုတင်ဖြစ်သွားတာဆိုရင် မှားမယ်မထင်ပါ ။ တကယ်တော့ ဒီကနေ.မှာ ကမ္ဘာကြီးဟာ ပြောင်းလဲလို.လာနေပါပြီ( Changing the World )။ ဒီလို ပြောင်းလဲလာနေပြီဖြစ်တဲ့ ဟောဒီ ကမ္ဘာကြီးမှာ နေထိုင်ကြသူများဟာလည်း အခြေအနေနဲ. လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ပြောင်းလဲလှုပ်ရှားကြရမှာပဲမဟုတ်ပါလား ။
ဒို့ကလေးတွေ စာဖတ်ဖို့ ဘာတွေ လိုအပ်သလဲ
By marlarnyein 3302 days ago on အတွေးအမြင် from www.maukkha.org
ကလေးတွေ စာဖတ်ဖို့လိုအပ်ကြောင်း ရေးထားတဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် ထိုင်းနိုင်ငံထုတ် The Nation သတင်းစာမှာ ( We need to get kids reading, right now) ဆိုပြီး ရေးထားတာကို ဖတ်ရတယ်။ တော်တော်ကောင်းတဲ့ ဆောင်းပါး တစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံတွေနဲ့ ချိန်ထိုးပြီးရေးထားတဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်းလူမျိုးတွေ တစ်နှစ်ကို စာအုပ်ရေ ၃၅ အုပ်ဖတ်ပါသတဲ့။ အဲဒါ အရှေ့တောင်အာရှက နိုင်ငံတွေနဲ့ ယှဉ်လိုက်ရင် အောက်ဆုံးကို ရောက်နေသေးတယ်။ ဒါကြောင့် ကလေးငယ်တွေ စာဖတ်ချင်လာအောင် ဘယ်လိုဆွဲဆောင်ကြမလဲ ဆိုပြီး နောက်တချိန်မှာ တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင် ဖြစ်လာကြမယ့် ကလေးတွေအတွက် စိုးရိမ်ပြီးရေးထားတဲ့ ဆောင်းပါးကောင်းတစ်ပုဒ်ြ
ပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတာဟာ လူတွေက မိမိကိုယ်ကို မိမိဘယ်လို ရှုမြင်သလဲဆိုတာနဲ့ အများကြီး သက်ဆိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ကိုယ်ကို ဘယ်လို မြင်သလဲဆိုတာက ကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်ရမှာ မဟုတ်လား။ မိမိကိုယ်ကို ကျေနပ် ပျော်ရွှင်တဲ့ အခါမှာ ကိုယ်တွင်းငြိမ်းအေးမှုနဲ့ စိတ်ချမ်းသာမှုကို ခံစားနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လို အခြေအနေမျိုးနဲ့ပဲ ကြုံဆုံရပါစေ။ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့တဲ့ စိတ်ထားကို ရရှိဖို့ သင်ယူလေ့ကျက်ထားသင့်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတာဟာ မိမိ ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေ၊ ဖြစ်ရပ်တွေကို ကိုယ်ရဲ့ ရှုမြင်သုံးသပ်မှုအပေါ်မှာ မူတည်နေလို့ပါပဲ။
By marlarnyein 3321 days ago on အတွေးအမြင် from mompoem.blogspot.sg
“ယောက်ျားလေးဆိုတာ မျက်ရည်မကျရဘူး သား… အထဲမှာ သားနဲ့အတူ ဆော့ကစားမယ့် ကိုကိုမမတွေ အများကြီးရှိတယ်။ ပြီးတော့ ဆရာမကလည်း သားကို သီချင်းတွေ အများကြီးသင်ပေးဦးမှာ။ သား သေချာလိုက်ဆိုပြီး မေမေ့ကိုပြန်ဆိုပြနော်။ မေမေရုံးဆင်းတာနဲ့ သားကို လာကြိုမယ်” မေမေ့ပြောစကားကို သူမျက်ရည်သုတ်ပြီး ခေါင်းညိတ်ပြတယ်။
By marlarnyein 3321 days ago on အတွေးအမြင် from www.99sanay.com
၁၈၆၇ ခုနှစ်မှာ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး William H. Seward ဟာ ဒေါ်လာ ၇.၂ မီလီယံနဲ့ ရုရှားနိုင်ငံရဲ့လက်ထဲကနေ အလက်စကား (Alaska) ကိုဝယ်ယူခဲ့တယ်။ ဝယ်ယူစဉ်ခဲ့တုန်းက လွှတ်တော်မှာ ပြင်းထန်တဲ့ ဝေဖန်ငြင်းခုန်သံတွေ မပြတ်ခဲ့ဘူး။ တချို့လွှတ်တော်အမတ်က သူ့ကို "Williamရဲ့ လူပြိန်းလုပ်ရပ်"လို့ ဝေဖန်ခဲ့ကြတယ်။ တကယ်လည်း အဲဒီတုန်းက အလက်စကားဟာ သဲဗွက်နဲ့ လေနီကြမ်းတွေကလွဲလို့ ဘာမှမရှိတဲ့အရပ်ဖြစ်တယ်။ ရှားစောင်းပင်တွေနဲ့ ပူးကောင်တွေသာ ပြည့်ခဲ့တဲ့အရပ်ဖြစ်တယ်။ လွှတ်တော်အမတ်တစ်ဦးက "ဒီရုရှားနယ်မြေက ငါတို့ကို ဘာ နာမည်ကောင်း၊ စည်းစိမ်ချမ်းသာ၊ အင်အားတွေပေးနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ငါတို့ကို ပိုအင်အားချိနဲ့စေမှာပါ" လို့ ပြောဆိုခဲ့
By marlarnyein 3321 days ago on အတွေးအမြင် from kyanaww.blogspot.sg
ပြီးခဲ့တဲ့ လလယ်လောက်က အိမ်မှာတုပ်ကွေးတွေဖြစ်ကြတယ် ကိုယ်ခံအားကောင်းတဲ့ အဘ တစ်ယောက်ပဲ မဖျားတာ အမေဖျားတုန်းက အမေကလည်း ဆေးမှ ကြိုမသောက်တာ ပြီးတော့ အဟာရရှိအောင် စားပါဆို ဒီခလေးတွေကိုပဲ ကျွေးနေ အမေကျမစားဘူးဆိုပြီ စကားကများမိသေး ။ ခလေးတွေက နို့ဗူးခလေး တွေဆိုတော့ သေးတွေ တအားကို ပေါက်ကြတာ အမေဖျားတော့ ကျနော် လျှော်ရတာပေါ့ လုပ်လည်းလုပ် စကားလည်းများ ..``ကိုယ့်ပါသာ အေးဆေးနေချင်လို့အပူမရှာတာ ခုတော့ သူတို့ဒုက္ခတွေ ကိုယ်ပါ ခံရတာ နံ့လိုက်တဲ့သေးကွာ အရင်က စတိုင်လ်ကြီးတစ်ခွဲသားနဲ့ နေခဲ့လေသမျှ ခုတော့ ဗြမ်းဗြမ်းကွဲတာပဲ ။
By marlarnyein 3321 days ago on အတွေးအမြင် from madankoo.blogspot.sg
By maungmaung 3321 days ago on အတွေးအမြင် from www.thettantcho.com
ဟိုး ရှေးရှေးတုန်းက ကမ္ဘာပေါ်မှာ အလွန်ကို မာကြောတဲ့ စတီးချောင်းကြီးတစ်ခုရှိခဲ့တယ် ။ လူတွေက အဲဒီစတီးချောင်းကြီးကို ဒီအတိုင်းထားမယ့်အစား အသုံးဝင်မယ့်ပစ္စည်းတစ်ခုခုအဖြစ် ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းပြီး အသုံးပြုလိုကြတယ် ။ ပထမဆုံး ပုဆိန်တစ်ခုနဲ့စမ်းသပ်ခဲ့တယ် ။
မနေ့ညနေက ကားစီးနေရင်း မျိုးကြီးရဲ့ “ ဆေးပေးပါ ” သီချင်းနားထောင်မိရင်း အတွေးတချို့တွေးမိလိုက်တယ် ။ အခုတလော တွေးတာတွေ က များနေပြီး စာကို မယ်မယ်ရရ ချမရေးဖြစ်ခဲ့ဘူး ။ အခုတော့တွေးမိသလောက်လေး ပြန်ချရေးကြည့်ဖြစ်တယ် ။
By mohmohkhin 3322 days ago on အတွေးအမြင် from mhuthaw.blogspot.sg
By suwatisoe 3343 days ago on အတွေးအမြင် from www.missgreenlady.com
ဗိုလ်မှူး James Nesmeth ဟာ ဂေါက်သီးရိုက် ကစားခြင်း အလွန်ဝါသနာကြီးသူ တစ်ယောက် ဖြစ်ပါ တယ်။ သူဟာ အပတ်စဉ် စနေ၊ တနင်္ဂနွေတိုင်း ဂေါက်ရိုက်ဖို့ သူတို့မြို့က ဂေါက်ကလပ်မှာ စနစ်တကျ ကစားတတ်အောင် အမြဲလေ့ကျင့်လေ့ ရှိပါတယ်။ သူဟာ ဂေါက်သီးရိုက်ရာတွင် ၁၈-ကျင်းကို ရိုက်ချက် ၉၀-ခန့်ထိအောင် ရိုက်တတ်တဲ့ သာမန် လက်ရည်ရှိသူ တစ်ယောက်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုလ်မှူး James Nesmeth ဟာ အပတ်စဉ်တိုင်း သူ့မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများနဲ့ မပျက်မကွက် လာရောက် လေ့ကျင့်လေ့ရှိပါတယ်။ သို့သော်လည်း တစ်ခုသောရက်မှ စကာ သူဟာ ကလပ်ရဲ့ ကွင်းထဲကနေ ပျောက်ကွယ် သွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလို ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တာဟာ ၇-နှစ်လုံးလုံး တစ်ကြိမ်တစ်ခါမှ ဂေါက်ကွင်းကို မရောက်ရ